झलनाथ खनाल, सुवास नेम्बाङ र केवी गुरुङको इलाममा गुट गुटको तानातान , उम्मेदवार चेपुवामा
सबै नगर र गाउँपालिकामा काँग्रेस र एमाले बीचमै मूल भीडन्त
प्रकाशित २०७४ वैशाख ३ आइतबार
इलाम । दुई दशक पछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै इलाममा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । काँग्रेस तथा एमालेमा केन्द्रीय राजनीतिमा समेत दख्खल राख्ने नेताहरु इलाम जिल्लाका भएका कारण समेत चुनावी माहोल तातिएकाे हाे ।
केन्द्रीय नेताहरुकै प्रभावले जिल्लामा समेत गुट उपगुटमा स्थानीय नेताहरु बाँडिएका छन् । ४ वटा नगरपालिकाको मेयर तथा ६ वटा गाउँपालिकामा प्रमुखमा दावी गर्नेहरुकाे भीड छ । काँग्रेसका केन्द्रीय नेता कुल बहादुर (केवी)गुरुङले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको टिकट दिलाउन कम चासो दिएको बताइएको छ । यद्यपि, जिल्लामा रहेका विभिन्न गुटमा भने आफ्नो गुटका स्थानीय तहका नेतालाई टिकट दिलाउन जिल्ला तहका नेताहरु मरि मेटेर लागेका छन् ।
काम गर्न सक्ने, पार्टीप्रति वफादार र स्थानीयस्तरमा विश्वास जित्न सक्ने भन्दा पनि गुटका नेताहरुलाई तल्लो तहबाटनै सिफारिस गर्न सबैतिर नेताहरुले दबाब दिएका कारण समेत वडाहरुमा स्वतन्त्र सिफारिस गर्न नपाएको गुनासो बढेको छ । वडाहरुमा अनावश्यक दबाब दिएका कारण सिफारिसमा कतिपय पपुलर नेताहरु ओझेलमा पर्ने देखिएको काँग्रेसका स्थानीय एक नेताले बताए । यस्तो स्थिति आए चुनावमा पार्टीलाई नाेक्सानी हुने अड्कल काटिदै छ ।
एमालेभित्र पनि इलाम जिल्लाभरीका ४ नगरपालिका तथा ६ गाउँपालिकामा गुट गुटका नेताहरुले नै टिकट पाउने देखिएकाे छ । पार्टीकाे अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका झलनाथ खनाल र सभामुख एवं संविधान सभाको अध्यक्ष समेत भइसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङबीचमा समेत आफू नजिकका स्थानीय नेतालाई टिकट दिलाउन होडवाजी नै चलेको एक नेताले बताए । जसका लागि उनीहरु आफ्ना गुटका उम्मेदवारलाई वडाहरुबाट सिफारिस गराउन लागि परेका छन् ।
चार नगरपालिकामा काँग्रेसका को-को ?
इलाम नगरपालिकामा कांग्रेसबाट मेयरमा जिल्ला पार्टी सभापतिमा हिमालय कर्माचार्य नै उठ्ने सम्भावना छ । उनीसँगै महासमिति सदस्यहरु केदार थापा, खगेन्द्र देवान, राजेन्द्र शर्मा र विष्णु लिम्बू उठ्ने चर्चा चलेपनि पार्टी सभापति कै नाममा सहमति हुनसक्ने देखिएको छ । इलाम नगरपालिका काँग्रेसको पकड भएको ठाउँ हो ।
देउमाई नगरपालिकामा मेयरकाे दावीमा मुख्य रुपमा पूर्व पार्टी जिल्ला सचिव होम दुलाल, क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति गोविन्द गिरी तथा जिल्ला सदस्य मेघ प्रसाद चम्लागाईको दावी छ । सुर्योदय नगरपालिकाको मेयरका लागि दुर्गा बराल, प्रेम चाम्लिङ र मिलन क्षत्रीको चर्चा बढी छ । यस्तै, माई नगरपालिकामा जिल्ला कोषाध्यक्ष विष्णु कार्की तथा कृष्ण खाकीको नाम चर्चामा छ । कार्की युवा नेता हुन् भने खाकी पुराना नेता हुन् ।
एमालेका को-को चर्चामा इलाममा चार नगरपालिकामा ?
इलाम नगरपालिकामा २०५४ सालमा जितेका पूर्व मेयर महेश बस्नेतको नै बढी चर्चा छ । उनी एमालेका जिल्ला सचिव पनि हुन् । उनी राजनीतिक रुपमा सुवासचन्द्र नेम्वाङसग नजिक छन् । उनीसँगै कृष्ण श्रेष्ठ, धिरेन चेम्जुङ र गणेश राईको समेत कार्यकर्ता बीचमा चर्चा छ । तर, निर्णय नभए पनि महेश बस्नेतको नाममा सर्वसम्मत हुने बताइएको छ ।
देउमाई नगरपालिकामा एमाले जिल्ला अध्यक्ष राम रानाको नाम बढी सुनिदै छ । उनीसँगै सूर्य पोख्रेल र गणेश बरालको नाम पनि उतिकै चर्चामा छ । अध्यक्ष राम रानाले चासो नदेखाएकले सूर्य प्रोख्रेल नै देउमाईको मेयरको टिकट पाउने निश्चित प्राय: रहेकाे एमालेका एक नेताले बताएका छन् ।
सूर्योदय नगरपालिकाको मेयरमा भने म्यानपावर व्यवसायी आरबी राईको नाम नै बढी चर्चामा छ । उनी झलनाथ खनालमा नजिकका विश्वासिला पात्र हुन् । उनी अधिकाशं समय काठमाडौं बस्ने गरेकै कारण उनीसँगै चर्चामा रहेका क्षेत्र १ का अध्यक्ष काजिमान कागतेको नाम अगाडि छ । सम्भवत कागतेले मेयरको टिकटको बाजी मार्ने आंकलन गरिएको छ । माई नगरपालिकाको मेयरका लागि एमालेबाट रत्न अधिकारीको बढी चर्चा छ भने उनीसँगै दिपक थेबे, धुब्र श्रेष्ठ तथा मेघनाथ गिरी र मुखराज आङदम्बेको समेत चर्चा भइरहेको छ ।
माओवादीबाट को-को छन त चर्चामा ?
इलाम नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज प्रभाष शर्मा र कार्यालय सचिव जीवन शर्माको बढी चर्चा छ । देउमाई नगरपालिकामा राम राईको चर्चा छ भने माई नगरपालिकामा मेयरका लागि भक्त लुङ्गेली र उर्मिला तामाङकाे चर्चा चलिरहेकाे छ ।
६ वटा गाउँपालिकामा कुन-कुन पार्टीका क-कसको छ दावी ?
माङ्सेबुङमा नेपाली काँग्रेसबाट डिकेन्द्र इन्दिङ्गोको नाम मात्र सिफारिस भएर आएको छ,भने एमालेबाट हेमन्त राई बढी चर्चामा छन् । उनीसँगै एमालेबाट पूर्ण बस्नेत, किरण राईको नाममा समेत चर्चा छ । चुलाचुलीमा काँग्रेसबाट अध्यक्षको दावी गर्नेहरुमा गणेश फागो र राजेन्द्र केरुङको नाम छ । एमालेबाट ओमनारायण खनाल र प्रदिप चन्द्र राईको नाम चर्चामा छ । फाकफोकथुममा काँग्रेसबाट रामकुमार श्रेष्ठ र केवी समालले दावी गरिरहेका छन् । एमालेबाट दिपेन्द्र खनाल, देबेन्द्र रेग्मी, प्रेम लिम्बू र नरेन्द्र केरुङ नाम चर्चामा छ । माईजोगमाई गाउँपालिकामा काँग्रेसबाट सिटी शेर्पा र रमेश सुवेदी नाम सिफारिस भएर आएको छ । एमालेबाट जीत बहादुर राई, याम सुवेदी र शिखर सापकोटाको नाम चर्चामा छ ।
रोङ गाउँपालिकामा शमशेर राई र लक्ष्मीकान्त घिमिरेको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट मेहेरमान तामाङ, बुद्ध ढकाल, बृहस्पति खतिवडाको नाम चर्चामा छ। सन्दकपुर गाउँपालिकामा धनबहादुर खाम्वाङ, देबेन्द्र सुवेदी, तुलाराम गुरुङ चर्चामा छन् । एमालेबाट मेयरको लागि उदय राई र उमेश गुरुङको नाम बढी सुनिएको छ ।
मतदाता र निर्वाचन केन्द्र
इलाममा एक लाख ९३ हजार ६ सय ४० मतदाता रहेका छन् । हाल तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको इलाममा संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई वटा क्षेत्रमा एमाले र एउटामा काँग्रेस विजयी भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा इलाम जिल्लाभरीमा १४४ निर्वाचन केन्द्र तोकिएको छ । जसमध्ये इलाम नगरपालिकामा २४ वटा, सूर्योदय नगरपालिकामा २१ वटा, माई नगरपालिकामा ११ वटा र देउमाई नगरपालिकामा १८ वटा मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ चुलाचुलीमा ९ वटा, फाकफोकथुममा १४ वटा, रोङ गाउँपालिकामा १३ वटा, माङसेबुङ गाउँपालिकामा १० वटा, माइजोगमाई गाउँपालिकामा ११ वटा र सन्दकपुर गाउँपालिकामा १३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
चैतको पहिलो साता देखी नै केन्द्रीय नेताहरु समेत जिल्लामा पुगिरहेका छन् । कार्यकर्ता प्रशिक्षण भन्दै काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा महामन्त्री शशांक कोइराला समेत इलाम पुगेका थिए भने एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ समेत जिल्लामा बाक्लै पुग्न थालेका छन् ।
मुख्य प्रतिश्पर्धा काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवार कै हुने
इलामको अधिकाशं नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवारबीचमै मूल भीडन्त हुने देखिएकाे छ । अधिकाशंमा काँग्रेस एमालेपछि माओवादी केन्द्रले पछ्याउने अड्कल काटिँदै छ । राप्रपा र अन्य दलहरु भने उम्मेदवारी दिए पनि उल्लेख्य मत नल्याउने धेरैको अनुमान छ । इलाममा १५ वटा पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्वाचन समितिले बताएको छ ।
कालिकोटमा काँग्रेसबाट तरुण दलका महासचिव शाही भिड्दै
तराई मधेश विरोधीलाई हैन तराई मधेशको मुद्धा निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलाई मतः लेखक
खेत जोत्दै किसान
गोरखामा नौ तहमा काँग्रेस, दुईमा माओवादी केन्द्र
सिराहामा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा
राष्ट्रपति चुनावका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्याे